Su'aalaha iyo Jawaabaha Sample ee ITIL Imtixaanka 2017 - ITS Tech School
Su'aalaha iyo Jawaabaha Sample for ITIL Imtixaanka 2017
ITIL Imtixaanka 2017 - Su'aasha iyo Jawaabaha Sample
ITIL waa qabanqaabooyin ku saabsan habka maamulka adeegga IT-da oo hagaajiya adeegyada IT-ga ee baahida ganacsiga. In la ogaado astaamaha ITIL ayaa sidan u muhiim ah ururada. Shahaadada ITIL waxay khibrad u leedahay khabiirada iyadoo la adeegsanayo habka ITIL iyo hirgelinteeda. Halkan waxaa ku yaal su'aalo tusaale ah iyo jawaabaha imtixaanka.
1. Sidee ayuu ITIL u caawinayaa yareeya kharashka wuxuuna hoos u dhigayaa qiimaha guud ee hantida ee maalgelinta IT?
Maalgelinta IT-ga iyo shaqaaluhu waxay jebiyaan jadwalkooda shaqada sababtoo ah shaqada aan la dhigan waxay u baahan tahay shaqada la qabanqaabiyay. ITIL waxay awood u leedahay ururada in ay joojiyaan wareeggaas oo waxay awood u siiyaan wakiilada in ay xoogga saaraan kharashka guud ee lahaanshaha iyo shaqooyinka kale ee ka jira aagagga khibradda leh.
2. Yaa awood u leh inuu doorto amarka isbeddelka la soo jeediyey ee ku jira nidaamka Maaraynta Isbeddelka ee ITIL?
Doorashada waxaa sida caadiga ah laga qaadaa Maamulaha Bedelka. Wuxuu damaanad qaadayaa in hawlgalladu ay gaareen bartilmaameedyada gudaha inta ugu badan ee suurtogalka ah iyo kharajyada xadidan iyagoo ballaadhinaya shaqaalaha soo dhaweynta iyo isticmaalka. Waxa uu xoogga saarayaa isbedelka hababka ganacsiga, qaybaha shaqada, qaabdhismeedka iyo qaabdhismeedka iyo dhismayaasha ururrada.
3. Waa maxay qiimeynta la sameeyay ka dib markii isbedel la fuliyay loo yaqaan?
Qiimaynta waxaa la dhahaa Dib u Eegista Dib-u-eegista (PIR). Tani waa dib-u-eegista iyo qiimeynta wadarta guud ee shaqada. Waxaa la sameeyaa ka dib markii lagu noolaado, xaaladaha qaar ka dib markii ay isdaba-taagnayd hawsha. PIR waxay qiimeeysaa ku-filnaanshaha qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka ka dib markii qaab-dhismeedku uu ku jiray xaalad abuuris ah ilaa lix bilood.
4. Nidaamka ITIL wuxuu hubiyaa in ururka uu ogyahay cusbooneysiinta cusub iyo isbeddelka cusub?
Maaraynta Awoodda ayaa damaanad qaadaysa in ururku uu ku sii wadi doono isbedelka cusub. Waxay xaqiijineysaa in qaab-dhismeedka IT-ga loo heli karo wakhti ku habboon mugga saxda ah qiimaha ku habboon ee waxtarka leh ee waxtarka leh.
5. Fursada khadka ah ee Maamulaha Heerka Adeegga wuxuu u baahan yahay xaqiijin ku saabsan meesha laga helo Adeegga Shaqada ee gudaha inay awoodi karto qadaro khaas ah oo ku jirta gudaha 10, taas oo warbixinta Heshiiska Adeegga loo baahan yahay in la diiwaangaliyo?
Waxaa jira heshiis la isku raacay Heshiiska heerka hawlgalka (OLA) taasoo muujinaysa sida IT-ga u kala duwan ee ururku u qorsheynayo inuu u gudbiyo adeeg ama qorshe adeegyo. Waxaa loogu talagalay in lagu daryeelo arrimaha ku jira bakhaarada IT-da iyada oo muujinaysa habeynta shuruudaha iyo adeegyada IT si ay u fuliyaan xafiis kasta.
6. Labaddee maaree Maareynta Maareynta Isticmaalka istaraatiijiyada maaraynta iyo baaritaanka khatarta
Labada geeddi-socodka waa Maareynta Soodhawaynta Adeegga iyo Maamulka Maareynta.
7. Caddee ereyada "Portfolio Service", Hantida adeegga iyo dhuumaha adeega.
Bandhigga Adeegga: Tani waxay calaamad u tahay adeegyada ay bixiyaan shirkadda adeeg bixiyaha si iskood ah isaga oo suuqyada kala duwan iyo macaamiisha kala duwan. Maaraynta Portfolio Adeeg ayaa ka baaraandegta khariidada adeegga. Waxay damaanad qaadaysaa in adeeg bixiyuhu uu leeyahay adeegyo si ay u daboolaan natiijooyinka ganacsiga lagama maarmaanka u ah heer sharci ah.
Muujinta adeegga: Tani waa qayb ka mid ah qaybaha adeegga. Waxay diiwaangelisaa adeegyada loo diyaariyey in la siiyo macaamiisha. Heerka adeega IT wuxuu diiwaan geliyaa hantida raasumaalka ah ee la heli karo iyo bixinta urur.
Qalabka adeegga: Waxay ku daraysaa adeegyada lagu shaqeynayo. Waxay ka hadlaysaa adeegyada mustaqbalka ee ay ku jiraan iyo iyadoo la shaqeynayo adeeg bixiyaha.
8. Cadeeyn CMIS, AMISOM iyo KEDB.
Nidaamka Warbixinta Maareynta Kartida (CMIS): Waa nidaam aasaas u ah aqoonta aasaasiga ah ee IT-ga, isticmaalka iyo fulinta macluumaadka macluumaadka la ururiyey oo laga saaray ugu yaraan hal database.
Nidaamka Macluumaadka Maareynta Helitaanka (AMISOM): Waa wadiiqo ficil ah oo ku saabsan maareynta Macluumaadka Maareynta Helitaanka meelo kala duwan.
Diiwaangelinta khaladaadka la yaqaan (KEDB): Xad-gudubka la yaqaan waa arrin la socdo darawalnimo weyn iyo shaqo ku wareegsan. Qodob kasta oo khaldan ee khaladka ah ee la yaqaan waa la duubaa oo la duubaa oo la duubo xogta la xaday.
Waxaa loo xilsaaray inuu tago tababarka ITIL si dadka raadinaya ay fursad u helaan inay isku xiraan macalimiinta macallimiinta iyo hababkaas oo ay kordhiyaan saldhigooda aqooneed. Fursadaha Xirfadaha ee ku xigta Sameynta Shahaadada ITIL.
Fursadaha Shaqo ee Shahaadada ITIL
Waa kuwee lix sigaar cabbitaan ama itil? Waa maxay kala duwanaanshaha?